ကျွန်မအတွက် မသက်သာသော Discount | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မအတွက် မသက်သာသော Discount
ကျွန်မအတွက် မသက်သာသော Discount
Posted by weiwei on Dec 27, 2010 in Creative Writing, Events/Fundraise, My Dear Diary |4comments
လျော့ဈေးအစီအစဉ်တွေကတော့ နေရာတိုင်း ဆိုင်တိုင်းမှာ အမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ အမြဲတမ်းနစ်နာနေခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့် ကျွန်မက တစ်ယောက်ထဲ ဈေးဝယ်ထွက်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ ဆိုင်မှာစားလေ့လဲရှိပါတယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်းမောလို့ ရေခဲမုန့်စားမယ်ဆိုပါစို့ … မက်ဒေါနယ်က ရေခဲမုန့်တစ်ခုကို ၉ ရွမ်၊ ၂ ခု ၀ယ်ရင် လျော့ဈေး ၁၂ ရွမ် လို့ကြော်ငြာထားပါတယ်။ တစ်ခုတောင် အနိုင်နိုင်စားရမှာဆိုတော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ … မတန်မှန်းသိသိနဲ့ တစ်ခုကို ၉ ရွမ်နဲ့ဝယ်စားရပါတယ်။ ကျွန်မခဏခဏသွားစားဖြစ်တဲ့ မြေအိုးမြီးရှည်လိုဆိုင်ကလဲ တစ်ပွဲထဲဆိုရင် ၂၀ ရွမ်၊ ၂ ပွဲဝယ်ရင် ၇ ရွမ်တန်တဲ့ အအေး ၂ ခွက်ရယ်၊ ၁၀ ရွမ်တန်တဲ့ မုန့်တစ်ပွဲရယ် လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ ဘာမှအပိုမရပါဘူး။ အကျီတို့ ဖိနပ်တို့ဝယ်ရင် တစ်ရံကို ၁၀၀ ရွမ်ဆိုပါတော့ .. ၂ ရံဝယ်ရင် ၁၂၀ လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ရံပဲလိုချင်တာဆိုတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး … လျော့ဈေးမရဘူးပေါ့ … အဲဒီလိုနဲ့ အရာရာတိုင်းကို တစ်ခုဝယ်ရင် တစ်ဈေး၊ နှစ်ခုဝယ်ရင် တစ်ဈေး၊ ၁၀ ခု ၀ယ်ရင်တစ်ဈေးနဲ့ သက်သာအောင်လျော့ပေးပေမယ့် ကျွန်မတော့ တစ်ခါမှ မသက်သာခဲ့ပါဘူး …
တစ်ခါကတော့ ဒိုးနပ်မုန့်ဝယ်စားပါတယ် … ဈေးမေးလိုက်တော့
တစ်ခု …. ၄.၅ ရွမ်
၄ ခု ….. ၁၆ ရွမ်
၆ ခု …. ၂၇ ရွမ်
၁၂ ခု …. ၃၆ ရွမ် အပြင် ၁၂ ခု ၀ယ်ရင် ၆ ခု လက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့ ….
၁၈ ခုကိုမှ ၃၆ ရွမ်ပဲကျသွားတာပေါ့ … ကျွန်မက သင်္ချာအတွက်ကောင်းပြီးတော့ ၁၂ ခု ၀ယ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီး ၁၂ ခု ၀ယ်လိုက်တော့ ၁၈ ခု ရသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားတာက ၂ ခုပဲ စားနိုင်မှာလေ … ကျန်တာတွေကို တခြားသူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် …
သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ သူတို့လျော့ဈေးက ဈေးဝယ်သူကို လှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ … ကျွန်မအနေနဲ့ ၂ ခု ကို ၉ ရွမ်နဲ့ပဲဝယ်လိုက်ရင် ၉ ရွမ်ပဲကုန်မှာပေါ့ … မတန်ဘူးလို့ စိတ်ထဲထင်မိတာနဲ့ ပိုက်ဆံပိုကုန်သွားပါတော့တယ် …
မဝေတော့ အဖော်လိုနေပြီ.. မုန့်တူတူ ၀ယ်စားဖော် ပြောပါတယ်။ ဒါမှ မုန့်ဝယ်ရင် သက်သာမှာ ဟုတ်တယ်မလား။ ဆူး နဲ့ အိမ်နီးရင်တော့ မဝေ အိမ်မှာ မုန့်တွေ လိုက်အုပ်တယ်။ အဟီး..
ပိစိကွေးလေး ကိုခေါ်ရင်လည်းရတယ်နော်………… ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူး အန်တီဝေရယ်….ပိစိကွေးကိုမခေါ်ချင်ရင်လည်း ပိစိကွေးမှာ ဦးဦးချောချောလေးတွေအများကြီးရှိတယ်
ဥပမာ ပြောရရင်တော့ ဂျွန်ခိုင်၊ ထယ်ပေါက်၊ ဖက်နူး စသည်ဖြင့် ကိုရီးယားမင်းသားများနှင့် တထပ်တည်းမကျသော်ညား လုံးဝမတူသော ဦးဦးချောချောလေးများရှိပါကြောင်း……………………….
စိတ်ဆိုးရဘူးနော်……… အရမ်းချစ်လို့စတာ အန်တီဝေ့ကို…. မဆိုးဘူးမလားကိုယ့်တူမလေးဖြစ်လာမယ့်သူပဲဟာ ဘာလို့ဆိုးရမှာလည်းနော့……. ;)
နဝတခေတ် အစောပိုင်းလောက်တုန်းက စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတခုထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ပေ၂၀ ကုန်တင်ကားရှည်တွေ ကုန်အပြည့်နဲ့ တံတားတွေပေါ်ဖြတ်တော့ တံတားတွေပျက်လို့ လမ်းတံတားဌာနက ကုန်တင်ကားတွေရဲ့ ယဉ်ကုန်အလေးချိန်ပေါင်းကို လျော့ချဖို့ ကားနောက်တွဲ ကွန်တိန်နာကို တိုအောင်ဖြတ်ခိုင်းတယ်။
မဝေကတော့ ပြောင်းပြန်လုပ်ရမယ်။ ဈေးလျော့တာနဲ့ တန်အောင် လူဦးရေကို များအောင်လုပ်နိုင်ရင် တန်သွားပြီပေါ့။